कोरोना विरुद्ध लड्न साथ दिनुहोस्, भ्रम नछर्नुहोस्ः मन्त्री ज्ञवाली
मन्त्रिपरिषद बैठक बस्दै, बन्दाबन्दीको अवधि बढाइने
टिप्पणी आइतबार, असोज २६, २०७६
–डा. सतिश देवकाेटा
आर्थिक रूपमा समृद्ध नेपाल नै चीनको सुरक्षा चासोको दिगो समाधान हो भन्ने कुरा बुझ्न र बुझाउन सक्नुपर्छ।
डा‍‌. सतिश देवकाेटा
कुनै पनि न्यून आय भएको गरीब मुलुकको आर्थिक विकास कस्तो हुने भन्ने कुरा उच्च आय भएका विकसित देशहरूसँग समाहित (कन्भर्ज) हुनसक्ने क्षमतामा निर्भर हुन्छ । यदि न्यून आय मुलुकले लामो समयदेखि उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरिरहेको छ भने तुलनात्मक रूपमा समाहित (रिलेटिभ्ली कन्भर्ज) भइरहेकै छ भन्ने बुझिन्छ ।
उदाहरणका लागि चीनलाई नै हेरौं, चीनले सन् १९८० देखि करीब ३० वर्षसम्म प्रतिवर्ष सरदर १० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गरिरह्यो, पछिल्लो ७–८ वर्षमा पनि वृद्धिदर ७ प्रतिशतभन्दा माथि नै छ । परिणाम, २०१९ सम्म आइपुग्दा चीन संसारकै दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्न पुग्यो ।
यसको अर्थ चिनियाँ अर्थतन्त्र अमेरिकी अर्थतन्त्रको तहमा करीब करीब समाहित हुन पुग्यो । तर, अमेरिकाको भन्दा सरदर ४ गुणा बढी जनसंख्या रहेको चीनले प्रतिव्यक्ति आयका आधारमा अमेरिकाको हैसियतमा पुग्न अहिलेकै हिसाबमा पनि झण्डै ४० वर्ष लाग्छ । तर, विकसित मुलुकहरूको प्रतिव्यक्ति आयस्तरमा पुग्न भने चीनलाई समय नलाग्ने देखिएको छ ।
अर्को उदाहरण, आर्थिक सहायता तथा विकास नियोग (ओईसीडी) मा आबद्ध २२ राष्ट्रले सन् १९५०–२००७ सम्ममा अमेरिकाको सो अवधिको भन्दा बढी आर्थिक वृद्धि हासिल गरिरहे । फलतः अहिले ती विकसित मुलुकको समूहमा समाहित हुन पुगे ।
तर, विडम्बना, समयको त्यही कालखण्डमा विश्वका ५५ अविकसित र विकासशील राष्ट्रले भने सामान्य वृद्धिदरलाई समेत पछ्याउन सकेनन् र आजसम्म विकास यात्रामा कतै रुमल्लिरहेका छन् । नेपाल रुमल्लिरहेका तिनैमध्येको एउटा देश हो ।
कतिञ्जेलसम्म हामी नेपाली गरीब बनिरहने ? के हामी कहिल्यै ‘विकसित’ बन्न सक्तैनौं ? यतिबेला नेपाल र नेपालीका लागि सबैभन्दा ठूलो प्रश्न र चुनौती यही हो । र, स्वयंमा यो प्रश्न गर्ने सबैभन्दा उत्तम समय पनि यही हो । किन पनि भने, यहीबेला विश्वको ठूलो आर्थिक शक्ति चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ पहिलोपटक नेपाल भ्रमणमा छन् ।
समाहित अर्थात् विकास
उच्च आय भएको चीनको आर्थिक वृद्धिसँग समाहित हुने नेपाली व्यग्रताले नै हामी कसरी र कहिले विकसित हुने, नहुनेजस्ता धेरै कुराको टुंगो लगाउनेछ । राष्ट्रपति सीको भ्रमण र यसपश्चात विकसित सम्बन्धको नयाँ आयामलाई आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा नेपालले उपयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
ओईसीडी मुलुकहरूको विकासको सूत्र पनि त्यही थियो । एक त पछिल्लो चार दशकमा यी मुलुकहरू र अमेरिकाबीचको सम्बन्ध सुमधुर रह्यो । अर्कातिर, त्यो समयावधिमा चीन र अमेरिकाबीच पनि खराब सम्बन्ध रहेन । यो अनुकूल परिस्थितिमा ती मुलुकहरूले नयाँ नयाँ प्रविधिमा आफूलाई अभ्यस्त तुल्याए । अमेरिकाको प्रत्यक्ष विदेशी लगानी भित्र्याए । देशभित्रै रोजगारी सृजना गर्दै सीप र दक्षता बढाउन सफल भए ।
यो सँगै ती देशहरूले एक–आपस र अमेरिकालगायत बढीभन्दा बढी उपभोक्ता भएका बजारसम्म राम्रो पारवहन सुविधाको विकास गरे । आफूलाई तुलनात्मक लाभ भएका वस्तु उत्पादन गरी निर्यात गर्ने र अरुसँग तुलनात्मक लाभ भएका वस्तु आयात गर्ने गतिलो संयन्त्र बनाए । यति भएपछि मानव संसाधन, पूँजी र प्रविधि केहीको अभाव भएन ।
यतिबेला हामीले गर्ने पनि त्यही हो । चीनसँग हाम्रो पहिलो प्राथमिकता भनेको विकास निर्माणमा सहकार्य गर्ने र भरपर्दो पारवहन सुविधा (रेलमार्ग, मोटर बाटो, हवाई मार्ग र विद्युत् प्रसारण लाइन) को विकास नै हो । त्यसो गर्न सके मात्र हामीले चीनको विकासको फल चाख्न पाउनेछौं ।
यसो नगर्ने हो भने, उत्तर अमेरिकाको भौतिक विकासको प्रभाव दक्षिण अमेरिकामा पर्न नसके जस्तै दशकौंसम्म पनि नेपाल ‘बत्ती मुनिको अँध्यारो’मा परेजस्तै अल्पविकसित अवस्थामै अल्झिरहनेछौं ।
सहकार्य गर्ने, सिक्ने
चीनसँगको पारवहन सुविधा अपरिहार्य आवश्यकता र शर्त हो । तर, साझेदारीको मोडलमा भने शुरुवात देखिनै ध्यान दिनुपर्छ । कुनै पनि पारवहन सञ्जाल निर्माणमा चीनको मात्रै लगानी वा सित्तैमा बनाइदेओस् भन्ने आग्रह राख्नु हुँदैन ।
यसो गर्नाले नेपालीले कहिल्यै पनि ज्ञान र सीप सिक्न सक्तैनन्, प्रविधि हस्तान्तरण हुन पाउँदैन । राष्ट्रिय संस्थाहरू पनि बन्न सक्तैनन् । विकासमा चीनसँग सहकार्य गर्ने हो, सिक्ने हो, माग्ने होइन।
विश्वको दोस्रो ठूलो आर्थिक शक्ति चीनसँग विकास परियोजनाका लागि हात फैलाउने होइन, सहकार्यको आग्रह गर्दै ज्ञान र सीप सिक्नुपर्छ, प्रविधि भित्र्याउनुपर्छ ।
चीनका निजी क्षेत्रलाई नेपालमा लगानीको आग्रह गर्ने र यसका लागि अनुकूल वातावरण बनाउने तर्फ पनि नेपालले पहलकदमी गर्नुपर्छ । चीनले नेपालको तराई क्षेत्रमा सामान उत्पादन गरी यहाँ मात्र होइन, दक्षिण एसियाभर नै बिक्री गर्न सक्छ । त्यसले नेपालमा रोजगारी सृजना हुने मात्र होइन, ‘फरवार्ड र ब्याकवार्ड लिंकेज इफेक्ट’का कारण अन्य क्षेत्रको विकासमा पनि प्रशस्तै टेवा पुग्छ ।
विकास र व्यापारका अतिरिक्त चीनसँग सिक्नैपर्ने अर्को कुरा भनेको सुशासन अर्थात् भ्रष्टाचार नियन्त्रणको संयन्त्र हो । किनभने, अहिलेको नेपालको ठूलो रोग भनेकै भष्टाचार हो, गर्नुपर्ने क्रान्ति भनेकै भ्रष्टाचार विरुद्धको हो । चीनले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि के–कस्ता प्रभावकारी प्रविधिहरू प्रयोग गरेको छ र त्यो प्रविधि कसरी हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ भन्नेबारे छलफल अघि बढाउन सकिन्छ ।
चीनसँग सुपुर्दगी सन्धिबारे पनि अस्पष्ट र अपुष्ट सूचना आइरहेछन् । तर, विचार गर्नुपर्ने कुरा के पनि छ भने आज पनि नेपालको परराष्ट्र नीति पञ्चशीलकै सिद्धान्तमा आधारित छ ।
यस हिसाबमा नेपालले तीनवटै शक्ति राष्ट्र चीन, भारत र अमेरिकासँग एउटै कुरा बोल्नुपर्छ । उस्तै व्यवहार गर्नुपर्छ । अर्थात् राष्ट्रपति सीको भ्रमणमा नेपालले पुनः आफू एक चीन नीतिमा अडिक रहेको दोहोर्‍याउँदै नेपाली भूमिबाट चीन विरुद्धका कुनै प्रकारका गतिविधि हुन नदिने विश्वास दिलाउनुपर्छ ।
सुपुर्दगी सन्धि गरेर होइन, आतंकवादका चुनौतीसँग लड्न सक्ने भरपर्दो र शान्तिप्रिय नेपाल बनाउन सहयोग गर्न आग्रह गर्नु पर्दछ । यसैमा नेपाल र नेपालीको हित प्रवर्द्धन हुन्छ, चीनको सुरक्षा चासोको दिगो समाधान निस्कन्छ । शान्त र समृद्ध नेपाल नै नेपाल–चीन सम्बन्धको आधार भएको कुरा बुझ्न र बुझाउन सक्नुपर्छ ।
(डा.देवकोटा अमेरिकास्थित युनिभर्सिटी अफ मिनासोटा मोरिसका अर्थशास्त्रका सहायक प्राध्यापक हुन् । प्रस्तुत आलेख उनको निजी विचार हो ।)
आइतबार, चैत १६, २०७६ कोरोना विरुद्ध लड्न साथ दिनुहोस्, भ्रम नछर्नुहोस्ः मन्त्री ज्ञवाली
आइतबार, चैत १६, २०७६ मन्त्रिपरिषद बैठक बस्दै, बन्दाबन्दीको अवधि बढाइने